အဲဒီမှာညစ်ညမ်းလောကီသားတို့သည်အထဲမှာလာမယ့်နှင့်သွားဖြစ်ကြောင်းအများအပြားခေတ်ရေစီးကြောင်းရှိပါတယ်,ဒါပေမယ့်အားလုံးအချိန်အများဆုံးပစ္စုပ္ပန်အမျိုးအစားများထဲမှအားလုံးဆက်ကပ်အကြောင်းပါ။ ငါနေဆဲအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့အစအဦး၌အချိန်ကိုသတိရ,လူအပေါင်းတို့သည်ကွန်ရက်များအများအားဖြင့်သူတို့၏ရုပ်ရှင်များတွင်ပျော့ပါဝင်ခဲ့သည်ကြသောအခါ. အဲဒီအတွက်အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ အဆိုပါပျော့အရည်ရွှမ်းအရည်ရွှမ်းနှင့်ကြီးမားသောပေမယ့်ရှိသည်,သူတို့ကင်းနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်သူတို့ပင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အားလုံးအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ အခုဆိုရင်အသစ်အသစ်သောညစ်ညမ်းအလတ်စားတွေကသင့်ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီ။, အကောင်းဆုံးကိုမီလိင်ဂိမ်း၏စုဆောင်းမှုသင်အင်တာနက်ကိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်သောရိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုခံစားနိုင်သည့်အတွက်အမာခံညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေပါဝင်တဲ့အကြီးအကျယ်စာကြည့်တိုက်နှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤစုဆောင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သောဂိမ်းအားလုံးသည်မျိုးဆက်သစ်မှဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းအသစ်ပိုကောင်းဂရပ်ဖစ်များနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုအဆင့်မြင့်နှင့်ရှုပ်ထွေးဂိမ်းနှင့်အတူလာမယ့်,ဒါပေမယ့်လည်းလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူ,သင်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများမှာလျှင်နေပါစေသင်ကိရိယာအမျိုးမျိုးအပေါ်အရာအားလုံးကစားရန်ရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။, အဆိုပါဂိမ်းသင့်ရဲ့ဘရောက်ဇာကိုတိုက်ရိုက်ရာအရပျကိုယူပြီးကြောင့်တိုးချဲ့မဆိုကြင်နာဘို့မလိုအပ်နှင့်အတူပြေး,ဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ်အရစ်ကျ.
အကြှနျုပျတို့သညျဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသောအပေါ်ဆိုက်ကိုလည်းအချက်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်,ဒါကြောင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အညွှန်းနှင့်ကြည့်ရှုဘို့လိုအပ်သမျှသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်တကွကြွလာ,သင်တို့ကိုလည်းအခြားကစားသမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဖို့သုံးနိုငျအချို့အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များဆောင်တတ်၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအကြောင်းနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုဒ်၌အကြှနျုပျတို့၏ဆိုက်အကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောစုဆောင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ နှင့်နံပါတ်များမှတပါး,အကောင်းဆုံးမီလီလိင်ဂိမ်း၏စုဆောင်းခြင်းလည်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပင်ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းစတိုင်များနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအဆုံးစွန်အနာရောဂါဒီဇိုင်းပြီးတော့ကျနော်တို့ကဒီပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိသည်သောလိင်ခကျြမြား၏စုဆောင်းမှုအတွက်သူမ၏ခက်ကိုဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားထဲမှာဂိမ်းတချို့ကသင်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌သိမဆိုကိုဖွင်နိုင်အောင်အများကြီးစိတ်ကြိုက်နှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။, အဆိုပါစိတ်ကြိုက်ပင်သင်သည်သင်၏မီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား၊သူမ၏လူမျိုးနှင့်ပင်သူမ၏လိင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုရွေးချယ်ပါစေဆန့်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်,ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏စုဆောင်းခြင်းကျနော်တို့ရှိသည်အားလုံးမကြာခဏလိင်အိပ်မက်တွေကိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဂိမ်းအတွက်ကျေနပ်စေနိုင်သည့်အတွက်အချို့သောလက်တွေ့ကျကျစိတ်ကူးယဉ်ကွင်းနှင့်အတူကြွလာတော်မူ၏။ ကျနော်တို့ဆရာ-ကျောင်းသားစိတ်ကူးယဉ်နှင့်ရုံးလိင်စွန့်စားမှုကနေသူ့ကိုသို့မိမိအမေကိုငုံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကနေအရာအားလုံးကိုတွေ့ကြုံခံစားရ၏ရသောရိုင်းပျသောကြံ့ကြံ့ကြံ့ခံတွေ့ဆုံမှညစ်ညမ်းအတွက်အားလုံးကိုအဓိကအခြေအနေနှင့်အတူဂိမ်းများရှိသည်။, ကာတွန်းတွေ၊ကာတွန်းတွေ၊ကာတွန်းတွေ၊ဂိမ်း၊ရုပ်ရှင်တွေကနေနာမည်ကြီးတဲ့မီနီဘတ်စ်တွေ၊ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းတွေနဲ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်မှာနောက်ထပ်အမျိုးအစားတစ်ခုရှိပါတယ်။
သငျသညျအဲကွန်းကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်,ထို့နောက်သင်ကျိန်းသေကျနော်တို့ကဒီမှာရှိသည်သောစာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းများ ၏ဌန်ကြိုးစားရန်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းအများဆုံးအစွန်းရောက်ဖို့ချိုမြိန်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကိစ္စနှင့်ပေးသောတိုင်းအဖြေကိုကွဲပြားခြားနားသောနောက်ဆုံးတွင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုရန်သင့်အားယူပြီးကြံစည်မှုလိုင်းပြောင်းလဲလိမ့်မည်သည့်အတွက်ဂိမ်းကိုဆက်ကပ်။ အများကြီးပိုရှိပါတယ်,သင်ရုံစူးစမ်းဖို့ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏လိင်ဂိမ်းအချို့အရည်အသွေးအရေးယူဘို့သင်လိုအပ်သမျှနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ငါတို့သည်အခမဲ့အရာအားလုံးကိုဆက်ကပ်။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုချွတ်အမြတ်ရသောမှတဆင့်အဘယ်သူမျှမလမ်းရှိပါသည်။ ဆိုက်တွင်ရှိသောကြော်ငြာများသည်တရားမျှတပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သင်ပြန်ညွှန်းခြင်းကိုဘယ်တော့မျှမလုပ်ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေသာဆာဗာမ်ားကိုမည္သည့္အခါမွေမးျမန္းျခင္းမျပဳပါ၊သင္၏အိုင္ပီလိပ္စာကိုမည္သည့္အခါမွသိမည္မဟုတ္ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုနှစ်သက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အခုအချိန်မှာအခမဲ့ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းပျော်မွေ့လာကြ!